Isamsung ye-Samsung S10: uyilo kunye neephothifoliyo yemali eziqinisekileyo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Imifanekiso emitsha ye-Samsung Galaxy S10 iqinisekisa uyilo lwayo kunye nokusebenza okunomdla
Ngalo lonke ixesha sisazi ngakumbi malunga neflegi elandelayo ye Samsung. Sele sibonile cIya kutyhilwa nini ngokusemthethweni i-Samsung Galaxy S10, Ngaphandle koko iingxaki zokufunda ngeminwe xa usebenzisa isikhuseli. Kwaye ngoku imifanekiso emibini emitsha ikhutshiwe esinika iinkcukacha ezintsha malunga noyilo lwe-Samsung Galaxy S10 kunye nokusebenza okulindelwe bambalwa kakhulu.
Kwaye ukuba imifanekiso emibini emitsha iye yavuza ebonisa uyilo lokwenyani lwangaphambili lwe-Samsung Galaxy S10, eqinisekisa loo mngxunya kwiscreen sokugcina ikhamera yangaphambili yesixhobo ephepha, kwakhona, i-noth. Kwaye nakwisixhobo esibonakalayo esifumana isixhobo esiya kuba luncedo kubasebenzisi abanemali ebonakalayo.
Ungasebenzisa i-Samsung Galaxy S10 njenge-wallet ye-cryptocurrency
Ewe ukumangaliswa kube kuhle kodwa njengoko ubona kwimifanekiso ehamba nezi ndaba, I-Samsung Galaxy S10 iya kuba nomsebenzi ukuze ikwazi ukugcina i-cryptocurrensets. Kwifoto eye yavuza siyabona ukuba kuphela kwemali yedijithali ehambelana nesiphelo yi-Ethereum, enye yezezimali ezisetyenziswa kakhulu, nangona inokwenzeka ukuba iya kuphelela kukhetho oluninzi.
Iya kubhalwa nge-blockchain, eya kuthi iqinisekise ukuba zonke ii-cryptocurrensets esizigcinileyo kwisiphelo zigcinwa zikhuselekile. Ukuthathela ingqalelo ukunyuka kolu hlobo lwentengiselwano, siyakukhumbuza Zeziphi ezona zicelo zine zilungileyo zokulandela ixabiso lee-cryptocurrensetsZiindaba ezimnandi ukuba ilungu elilandelayo losapho lwaseKorea iGlass S linokusebenza.
Asazi ukuba zeziphi iimodeli ezinokuhambelana, nangona eyona nto isengqiqweni kukucinga ukuba konke Iinguqulelo ze-Samsung Galaxy S10, kubandakanya i-Samsung Galaxy S10 Lite iya kuba nesi sixhobo esinokufikelela kwiinguqulelo zangaphambili ngohlaziyo lwesoftware.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Imifanekiso emitsha ye-Samsung Galaxy S10 iqinisekisa uyilo lwayo kunye nokusebenza okunomdla
Vuna izityalo, phakamisa izilwanyana kwaye uphonononge imingxunya kwiQube
U-Spike ujika ii-imeyile zakho zibe yimilayezo yengxoxo ngokungathi zii-WhatsApp